Lumbini Times | Nepal's Independent News Portal. कसरी जोडिन सकिन्छ वास्तविक जीवनसँग ? :: Lumbinitimes
आइतबार, पुस ४, २०७८ लुम्बिनी टाइम्स
काठमाडौं-कोही पनि व्यक्ति ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि असक्षम हुँदैनन् । यदि तपाईं जान्नको लागि असक्षम हुनुभएको भए, म तपाईंमाथि आफ्नो समय बर्बाद गर्ने थिइनँ— विश्वास गर्नुहोस्, म यी कुराहरूप्रति एकदमै कठोर छु ।
यदि तपाईं पूर्ण रूपमा असक्षम हुनुहुन्छ भने, तपाईं कुनै सम्भावना नै होइन, तसर्थ म तपाईंसँग एक क्षण पनि खेर फाल्ने छैन । के तपाईंले मलाई कहिल्यै भ्यागुतोलाई ध्यान सिकाउने कोसिस गरेको देख्नुभएको छ ? मैले जीवविज्ञान (बायोलोजी) को कक्षामा बाहेक भ्यागुतासित एक क्षण पनि व्यर्थै बिताएको छैन, किनकि म त्यसमा कुनै सम्भावना देख्दिनँ ।
यदि तपाईंले आफ्नो शरीर, श्वास, हृदय, कलेजो वा मृगौलालाई अनिच्छुक बनाउनु भएको भए, तपाईं मर्नुहुने थियो । तपाईंको जीवनको लागि अत्यावश्यक पर्ने चीजहरूलाई प्रकृतिले आफ्नो हातमा राखेकी छिन् । प्रकृतिले तपाईंको हातमा एउटा सानो चीज थमाएकी छिन्, तर त्यसलाई समेत तपाईं अस्तव्यस्त पार्न चाहनुहुन्छ ।
तपाईंसँग यो मन छ, जहाँ तपाईं केही गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं यसलाई जीवनको प्रक्रियाप्रति कि त इच्छुक बनाउन सक्नुहुन्छ वा अनिच्छुक । अरू सबै चीजहरूको सन्दर्भमा तपाईंसँग कुनै विकल्प हुँदैन, यसैपनि ती स्वतः इच्छुक छन् ।
यो यस्तो प्रश्न हो, जुन थुप्रै मानिसहरू उपेक्षा गर्छन्— एक पलको लागि पनि आफूमाथि यो प्रश्न तेर्स्याउँदैनन् । यदि तपाईंले आफ्नो निम्ति केही समय निकाल्ने हो भने—यदि तपाईं परिवारका सदस्यहरूबाट टाढै रहेर, टिभी वा किताबमा नभुलिकन अथवा यहाँ सम्म कि झ्यालबाट बाहिर नहेरिकनै २४ घण्टासम्म यत्तिकै चूपचाप बस्नुभयो भने, यो प्रश्न तपाईंसामु विशाल रूपमा प्रकट हुनेछ, ″आखिर मेरो अस्तित्व के हो ?″ तपाईं यसलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न ।
तर, तपाईं आफ्नो लागि अलिकति पनि समय निकाल्नुहुन्न । संसारलाई तपाईंको कामको आवश्यकता भएर तपाईंले आफूलाई व्यस्त राख्नुभएको होइन । तपाईं चाहे जोसुकै भएपनि, तपाईंबिना संसार चल्न सक्छ । तपाईं र मबिना यो संसार चल्न सक्छ ।
संसारलाई खाँचो भएकोले तपाईंले काम गरिरहनु भएको होइन; तपाईंले काम गर्नुको कारण के हो भने, तपाईंमा केही न केही गर्नैपर्ने बाध्यात्मक प्रवृत्ति छ । तपाईं यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न । यसो कोसिस गरेर हेर्नुहोस्: तपाईंले आफ्नो शरीर र मनमा जे-जति गरिरहनु भएको छ, के तपाईं ती सबैलाई रोक्न सक्नुहुन्छ ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस ४, २०७८, १०:२१:००